कार्डियो कसरत - यो हृदय प्रणाली बलियो बनाउन र फोक्सो मात्रा मा वृद्धि गर्न डिजाइन अभ्यास को एक सेट। कक्षाहरू को मुख्य विधि गहन हिँडाइ, जगिङ, पौडी, साइक्लिङ, क्रस-कन्ट्री स्किइङ छन्।
आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह
कार्डियो कसरत मात्र होइन हृदय र रक्त नली, तर पनि शरीर को सबै प्रणाली बलियो सामान्य तरिकाले-जा सुधार, तनाव राहत मदत। तिनीहरूले मधुमेह र उच्च रक्तचाप को राम्रो रोकथाम छन्। साथै, कार्डियो कसरत - यो वजन उत्कृष्ट तरिका हो।
यो सही छ?
तपाईं निर्णय अघि व्यायाम सुरु गर्न, आफ्नो चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। उहाँले आफ्नो हालत मूल्याङ्कन र प्रशिक्षण को विधि को विकल्प निर्धारण गर्न मद्दत गर्नेछ। व्यायाम यस प्रकारको लागि सबैभन्दा उपयुक्त प्रविधी हिड्ने छ। यो दिन को कुनै पनि समय, कहीं पनि अभ्यास गर्न सकिन्छ, र विशेष उपकरण आवश्यक छैन। आफ्नो क्षेत्रमा त्यहाँ एक चक्र ट्रयाक, स्विमिंग पूल, फिटनेस क्लब हो भने, त्यसपछि जस्तै विधिहरू साइकलको, पौडी, एरोविक्स कार्डियो workouts को लागि एक महान सुरु हुन्छन्।
कार्डियो र वजन प्रशिक्षण एक हप्ताको 2-3 पटक बाहिर छ। न्यानो बिस्तारै बढ्दै तीव्रता र लोड सुरु गर्नुपर्छ। प्रशिक्षण सत्र अभ्यास मांसपेशीमा र stretching समाप्त साँस अभ्यास। तपाईं 30-35 मिनेट लिए प्रशिक्षण को महिना को अन्त द्वारा भनेर प्रत्येक दिन बिस्तारै समय बढ्छ।2महिना पछि यो एक थप दिन अभ्यास गर्न एक हप्ताको थप्न सम्भव छ। साथै, बिस्तारै नयाँ प्रशिक्षण अभ्यास प्रवेश र आफ्नो प्रदर्शन को तीव्रता वृद्धि।
मन संग वजन
नियम, कार्डियो कसरत समावेश बल अभ्यास। तर तपाईं शरीर मांसपेशीमा को विस्तार गर्न थप ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो सम्भव शक्ति यी गतिविधिहरु वैकल्पिक छ। तपाईं आदेश वजन मा कार्डियो प्रशिक्षण प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, यो सामना गर्न बिहान सिफारिस गरिएको छ। यो भन्दा intensively चयापचय पारित र बोसो जला दिन को यो समय मा थियो। कार्डियो कसरत - यो सही यो दृष्टिकोण भने, वजन एक धेरै प्रभावी तरिका हो।
यो तपाईं उठ्दै पछि र खाली पेट मा तुरुन्तै प्रशिक्षण सुरु गर्न सक्दैन भनेर थाहा महत्त्वपूर्ण छ। पेशागत मनमोहक को सुरु गर्नु अघि 15 मिनेट उत्पादन, कार्बोहाइड्रेट मा धनी, उदाहरणका अङ्गुर वा लागि खान केले। प्रशिक्षण पछि सेवन सिफारिस गरिएको छ : प्रोटिन-कार्बोहाइड्रेट खाद्य पदार्थ को चिकन, उबला अन्डा, उबला चामल।
सबै परिसर हुनुपर्छ
एक पातलो आंकडा को पीछा मा व्यायाम संग यो ज्यादा छैन। राम्ररी चुनिएको व्यायाम, को कक्षाहरू प्लस सन्तुलित आहार - छिटो र उच्च गुणस्तर आहार को एक ग्यारेन्टी छ। र तपाईं आदेश वजन मा, तपाईं थप संलग्न र कम खाने गर्नुपर्छ भनेर सोच्न भने, यो गहिरो गलत छ। यस मामला मा, तपाईं गुमाउनु हुनेछ वजन बोसो, तर मांसपेशी छैन। शरीर "आरक्षित मा" क्यालोरी छोड्न हुनेछ, र बोसो कहीं जाँदै छैन। अभ्यास र उचित पोषण को एक सेट छ - त्यसैले वजन लागि कार्डियो कसरत कि सम्झना।
तपाईं वर्ष आएको, फूल, जवान शरीर र प्राण लागि सुन्दर रहन चाहनुहुन्छ भने, कार्डियो कसरत - यो सिर्फ तपाईं आवश्यक के छ। आफ्नो खुशी संलग्न र स्वस्थ हुन!
न्यानो-अप, बल, कार्डियो: पातलो लागि पाठ
के अभ्यास पेट बोसो हटाउन गर्नुपर्छ
कसरी एक जिम बिना जांघ को मात्रा कम गर्न?
के प्लास्टिक बोतल गरे, यो पत्ता लगाउन रोचक छ?
हेडफोन समीक्षा Sennheiser HD 202: सुविधाहरू, फोटो र समीक्षा
मारिया Kapnist - को युक्रेनी SSR को कलाकार बडे। जीवनी, रचनात्मकता